ပြတိုက်ရှင်ရေ အဖေ ကျန်မာရေးပြန်ကောင်းပြီလား မြန်မြန်ပြန်ကောင်းပါစေဗျာ 10 Oct 08 13:01
ဖိုးဖိုး အမြန်ဆုံးနေကောင်းပါစေလို့ ... 10 Oct 08 09:54
ဦးဦးရေ.. သမီးစာမေးပွဲပြီးပြီ.. ဦးဦးရဲ့ ဖေဖေ နေမကောင်းဘူးဆို.. သမီးဘုရားမှာ ဆုတောင်းပေးမယ်နော်.. 10 Oct 08 09:53
ံဟတ်ကြီးေ၇.... အခြေအနေလေးတွေ Update lote bar ohn... ဟတ်ဖေဖေ အမြန်နေကောင်းပါစေ.. 09 Oct 08 16:22
လာလည်နေကျ အစ်ကို့ကိုမတွေ့တော့လဲ ၁ခုခုလိုနေသလိုပဲ.. ကျန်းမာရေးလဲဂရုစိုက်အုံးနော်.. 09 Oct 08 01:43
ကိုပြတိုက်ရေ..ပျောက်နေတာကြာပေါ့.. နေကောင်းရဲ့လား.. အစ်ကို့အဖေနေအမြန်ဆုံးပြန်ကောင်းပါစေနော်.. 09 Oct 08 01:42
ကိုပြတိုက်ရဲ့အဖေအမြန်ဆုံးကျန်းမာပါစေ။။။။။။။။။ 08 Oct 08 22:14
အစ်ကို့ အဖေ အမြန်ဆုံး နေကောင်းလာပါစေ 08 Oct 08 10:38
မင်္ဂလာပါ ဗျို့ ကိုဟကြီး။ အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ။ အကျိုးအကြောင်းလေး သိချင်တယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ... 07 Oct 08 02:22
အစ်ကို့ အဖေသက်သာလား စိတ်ပူနေလို့မြန်၂ကျန်းမာပါစေဗျာ...။ 07 Oct 08 02:11
အကို့အဖေ နေကောင်းပြီလား အဆင်ပြေပါစေ 06 Oct 08 23:26
ပြတိုက်ရှင်မရှိတုန်း ပြတိုက်ကို ၀င်သွားတယ်.. ပျော်ရွှင်စရာတွေ အမြန်ဆုံး ရောက်လာပါစေ 06 Oct 08 08:51
hi bro. how's everything? hope that you'll be fine. hear from you soon.. 06 Oct 08 06:18
Heart Gyi yae...အဖေ့ကျန်းမာရေး အမြန်ကောင်းလာပါစေ....
ပြတိုက်ရှင်ရေ လာလည်ပါ၏။ ပြတိုက်ရှင်ရဲ့ ဖခင်ကျန်းမာပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ 05 Oct 08 07:33
အစ်ကို့ အဖေ အမြန်ဆုံး နေကောင်းလာပါစေဗျာ 04 Oct 08 23:45
ကျွန်တော့်လိုပဲ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ အားလုံးက ဆုတောင်းပေးနေကြပါလိမ့်မယ် :( 04 Oct 08 23:45
လာလည်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ။ 04 Oct 08 13:01
ကိုဟရေ--- ဖေဖေနေကောင်းသွားပြီလား--ပျောက်နေတယ်နော်-- 03 Oct 08 21:05
ကိုဟတ်.. အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ.. 03 Oct 08 20:34
ဦးလေးဂျီး ဖေဖေ မြန်မြန်ကျမ်းမာပါစေနော 03 Oct 08 15:33
သွေးလှူတဲ့အကြောင်းဖတ်ရတာ သာဓုပါ အဲဒီသတင်းကြားပြီး ကိုယ်နဲ့မပါတ်သက်ပေမဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလေ 03 Oct 08 15:17
ပြတိုက်ရေ ..အဖေ သက်သာရဲ့လား .. 03 Oct 08 14:00
Heart Gyi ရဲ့ အဖေနေကောင်းလာပီလား? နေကောင်းကျန်းမာလာပါစေ...... 02 Oct 08 21:11
ကိုပြတိုက် ...။ အစ်ကို့အဖေ အမြန်ဆုံး ကျန်းမာလာနိုင်ပါစေဗျာ...။ :( 02 Oct 08 20:57
သက်သာလားဗျာ။စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ 02 Oct 08 12:29
မင်္ဂလာပါ ကိုဟ၊ အဖေ နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ထပ်တူ ထပ်မျှပဲ။ ပြန်လှည် ကျန်းမာပါစေ.. 02 Oct 08 10:27
အလည်လာသွားတယ်နော် အဆင်ပြေတယ်ဟုတ် ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ။ 01 Oct 08 16:46
အစ်ကိုကြီးဟတ်.. အဆင်ပြေပါစေ.. 01 Oct 08 04:16
အဆင်ပြေရဲ့ လား အစ်ကိုဟတ် 30 Sep 08 19:12
မတွေ့တာကြာပေါ့ နေကောင်းကျန်းမာပါစ.. :glad: :lol: 30 Sep 08 16:16
အစ်ကို့ အဖေ မြန်၂ကျန်းမာပါစေဗျာ....... 30 Sep 08 02:28
ကိုပြတိုက်ရဲ့အဖေ မြန်မြန်ပြန်လည် ကျန်းမာလာပါစေရှင်... 29 Sep 08 11:59
wish your dad to get well soon. 29 Sep 08 05:50
အဖေကြီးနေကောင်းပါစေနော်... ခုမှ message twe lo. 29 Sep 08 01:18
အဲသမှာမှအမေနဲ့အဖေထပ်လွဲသေး...... 28 Sep 08 20:18
sorry ဗျာ....စာကအခုမှပေါ်လာတယ်...အစ်ကို့အမေအမြန်ဆုံးကျန်းမာနိုင်ပါစေအစ်ကို။။။ 28 Sep 08 20:16
အစ်ကိုဟတ်ရဲ့  မေမေလည်း စိတ်ပူရတာတွေ သက်သာပါစေ.. 28 Sep 08 16:13
အစ်ကိုဟတ်လည်း စာတွေ ပြန်ရေးနိုင်ပါစေ 28 Sep 08 15:15
အစ်ကိုဟတ်ရဲ့  မေမေလည်း စိတ်ပူရတာတွေ သက်သာပါစေ.. 28 Sep 08 15:15
အစ်ကိုဟတ်ရဲ့  ဖေဖေ အမြန်ကျန်းမာပါစေ 28 Sep 08 15:15
ပြတိုက်ရှင်ရေ အဖေဆေးရုံတင်ထားရတယ်ဆိုလို့ အမြန်ဆုံးနေပြန်ကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ 28 Sep 08 12:20
ဦး...ကျမ္မာသွားပြီလာ...ဆုတောင်းပေးပါတယ် 28 Sep 08 12:05
အောင်စစ်မင်း ဟီဟီမှားလို့ပါ 28 Sep 08 08:34
အကိုရေ အကို ရဲ့ မိသားစုအားကျမ်းမာကြပါစေနော် အကို ဒုတိယမြောက်ပို့လေးကို ကြိုက်လို့ ညီရဲ့ ဘလောမှာ တင်လိုက်တယ်နော်.. ခွင့်ပြုပါ။ ညီရဲ့ ဘလော့က http://wwwakar-kyawswar.blogspot.com/ ပါ ပျော်ရွှင်ပါစေ28 Sep 08 08:28
အဖေ အမြန် ဆုံး ကျန်းမာ ပါစေရန် မေတ္တာ ပို့သ ပါသည်။ again and again 28 Sep 08 00:14
Posted by Heartmuseum at 1:52 AM